Kedu ihe dị mma iji ziga ozi ederede? | Martech Zone
O nwere ike ịbụ na ọ dịghị ahịa ọ bụla na-aga n'ihu na iji mgbapụta na nzaghachi dị mma karịa ozi ederede (SMS). Otu ụlọ ọrụ na-eleghara ndị debanyere aha ya anya SMS ga-ahụ klọb ederede ha na-ebelata yana nweta ego yana ya. N'akụkụ nke ọzọ nke ụdịdị dị iche iche, ịba ndị ahịa ozi nwere ike iwe ha iwe, ọ ga-abụkwa na ọ ga-ebute ọtụtụ ndị na-edeghị aha.
Ihe omuma ihe omuma ahia SMS kacha mma ma nye ihe omuma banyere omume nke ndi debanyere aha, gunyere:
Etu ị ga - esi tụọ uru ndụ nke onye debanyere aha na SMS.
Etu ị ga-esi nweta nkwenye n'ahịa site na SMS gaa na ndepụta ndị debanyere aha gị.
Otu esi enyocha ihe ndị ederede ederede chọrọ na oge ole ha chọrọ ya.
Etu ị ga-esi gosipụta usoro metrik dị ukwuu wee tụọ nsonazụ gị nke ọma.
Onye ahia ọ bụla nwere ikikere ga-edozi oge izi ozi ha, olu ya niile, na onyinye iji hụ na ha na-enye atụmanya uru. Ọ bụrụ n ’ọ bụrụ na ị ga - achọ nghọta nghọta n’ịrụpụta mkpọsa ngwa ahịa SMS dị irè, anyị nwere isiokwu ọzọ na Isi ihe isii dị na ahịa ederede ederede.
Na SMS ozi, nke a nwere ike ịbụ ihe dị mkpa karịa ihe ọ bụla ọzọ na-ajụ nyere na a ụtụ magazin na-enye ikike iji nweta ha onwe ha. Neon SMS, nnukwu ụlọ ọrụ ahịa ederede na Ireland, mepụtara ihe omuma a - Etu ị ga-esi nweta ego na ahịa SMS inye ụfọdụ Atụmatụ, stats, na azum nke optimizing gị ederede ozi atụmatụ.